Mliswa savages mujuru again – Zimbabwe Daily
Mliswa savages mujuru again
ZIMBABWE – Former Vice-President Joice Mujuru’s much-vaunted People First (PF) political project could die a natural death “because it is operating exactly as the Zanu PF politburo”, former Zanu PF Mashonaland West provincial chairperson Temba Mliswa has said. Responding to allegations that he was a ruling party mole bent on destabilising the democratic movement in Zimbabwe, Mliswa said Mujuru had “literally missed the bus”.
Mliswa was among nine chairpersons ousted in co-ordinated no-confidence votes as the ruling party hurtled towards an elective
“It is exactly the same way the Zanu PF politburo operates and I do not see anything new that Mujuru would do that she has not learnt from Mugabe. They are creating another Mugabe out of Mujuru.” newsday
Previous PostMujuru’s PF is doomed, says Mliswa
Next PostMujuru not a coward – Kunaka
ZIMBABWE - Former Vice-President Joice Mujuru’s much-vaunted People First (PF) political project could die a natural death “because it is operating exactly as the Zanu PF politburo”, former Zanu PF Mashonaland West provincial chairperson Temba Mli...